Ụgbọ elu eletriki ọhụrụ Rolls-Royce na-agbapụ n'ụzọ nkịtị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu eletriki ọhụrụ Rolls-Royce na-agbapụ n'ụzọ nkịtị
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Tourism • Transportation • Akụkọ UK na -agbasa
Rolls-Royce ụgbọ elu eletrik niile
Ebe ahụ: Boscombe Down nke Ministry of Defense. Oge ụgbọ elu ahụ: nkeji 15. Ụgbọ elu: Rolls-Royce Mmụọ nke Innovation eletrik niile. Ihe ga -esi na ya pụta: ihe dị ịrịba ama ọzọ maka njem ụgbọ elu decarbonized.
Rolls-Royce gbara mbọ ọzọ na ndekọ ụwa site na iji ụgbọ elu eletrik ya niile.
Ụgbọ elu nke mbụ a na -enye ụlọ ọrụ ahụ ohere ịnakọta data arụmọrụ bara uru na ọkụ eletrik na sistemụ mkpali.
Na mmepe bụ sistemụ mgbanyụ ọkụ eletrik zuru oke maka ikpo okwu ya, ma nke ahụ bụ mbuli elu eletrik na ọdịda (eVTOL) ma ọ bụ ụgbọ elu ndị njem.
Rolls-Royce kwupụtara taa mmecha ụgbọ elu mbụ nke ọkụ eletrik ya niile Mmụọ nke Innovation ugbo elu. Na 14:56 (BST) ụgbọ elu ahụ weere na mbara igwe nke igwe ọkụ eletrik 400kW (500+hp) ya na ngwugwu batrị nwere nnukwu ike jikọtara ọnụ maka ụgbọ elu. Nke a bụ nzọụkwụ ọzọ na-aga ịnwa ndekọ ndekọ ụwa nke ụgbọ elu na ihe ọzọ dị mkpa na njem ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-aga imebi emebi.
Warren East, onye isi ala Rolls-Royce, kwuru, sị: “Ụgbọ elu mbụ nke Mmụọ nke Innovation bụ nnukwu ihe nweta maka ndị otu ACCEL na Rolls-Royce. Anyị na -elekwasị anya n'ịmepụta ọgbara ọhụrụ nke ọha mmadụ kwesịrị imebi ebugharị ikuku, ala na oke osimiri wee weghara ohere akụ na ụba nke ntughari na efu efu.
“Nke a abụghị naanị gbasara imebi ndekọ ụwa; batrị dị elu na teknụzụ mkpali ewepụtara maka mmemme a nwere ngwa na -atọ ụtọ maka ahịa Urban Air Mobility ma nwee ike inye aka mee ka 'jet zero' bụrụ eziokwu. "
Onye odeakwụkwọ azụmahịa UK Kwasi Kwarteng kwuru, sị: “Mmeri a, yana ndekọ ndị anyị nwere olileanya na ha ga -eso, na -egosi na UK ka nọ n'isi mmalite ihe ọhụrụ aerospace. Site n'ịkwado ọrụ dị ka nke a, gọọmentị na -enyere aka ịkwaga ókè, na -akwalite teknụzụ nke ga -enyere itinye ego aka ma mepee ụgbọ elu na -acha ọcha ka achọrọ iji kwụsị onyinye anyị maka mgbanwe ihu igwe. "
N'oge ụgbọ elu mbụ a, Rolls-Royce ga-anakọta data arụmọrụ bara uru na ọkụ eletrik na sistemụ mkpali. Mmemme ACCEL, dị mkpụmkpụ maka "Ịgbalite ọkụ eletrik nke ụgbọ elu," gụnyere ndị mmekọ bụ isi YASA, igwe eletriki na onye nrụpụta njikwa, yana mmalite ụgbọ elu Electroflight. Ndị otu ACCEL gara n'ihu na -emepụta ihe ọhụrụ ka ha na -agbaso ndọpụ mmekọrịta ọha na eze UK na ntuziaka ahụike ndị ọzọ.
Ọ bụ ụlọ ọrụ Aerospace Technology Institute (ATI) nyere ọkara nke ego a, na mmekorita ya na Ngalaba Azụmaahịa, Ike na Mmepụta Ọrụ na Innovate UK.
Onye isi oche nke ụlọ ọrụ teknụzụ Aerospace, Gary Elliott kwuru, sị: “ATI na -akwado ọrụ dị ka ACCEL iji nyere UK aka ịzụlite ikike ọhụrụ na ị nweta ụzọ na teknụzụ ga -emebi ikuku. Anyị na -ekele onye ọ bụla rụrụ ọrụ na ọrụ ACCEL iji mee ka ụgbọ elu nke mbụ bụrụ eziokwu ma na -atụ anya ịnwale ndekọ ọsọ ọsọ ụwa nke ga -ejide echiche ọha na eze n'afọ nke UK na -akwado COP26. Flightgbọ elu mbụ nke Mmụọ nke Innovation na -egosi ka teknụzụ ọhụrụ nwere ike isi nye ụfọdụ nsogbu ụwa nnukwu nsogbu. ”
Companylọ ọrụ ahụ na -emepere ndị ahịa ya sistemu eletriki zuru oke maka ikpo okwu ya, ma nke ahụ bụ eletriki kwụ ọtọ na ọdịda (eVTOL) ma ọ bụ ụgbọ elu ndị njem. Ụlọ ọrụ a ga -eji teknụzụ sitere na ọrụ ACCEL na -etinye ya n'ọrụ maka ahịa ọhụrụ ndị a. Njirimara nke “tagzi ikuku” chọrọ site na batrị yiri nnọọ ihe a na -emepụta maka Mmụọ nke Innovation, ka o wee nwee ike iru ọsọ 300+ MPH (480+ KMH) - nke bụ ebumnuche maka ịnwale ndekọ ụwa. Na mgbakwunye, Rolls-Royce na airframer Tecnam na-arụkọ ọrụ ugbu a na Widerøe, mpaghara ụgbọ elu mpaghara na Scandinavia, iji nyefee ụgbọ elu eletrik maka ahịa njem, nke ezubere ịdị njikere maka ọrụ ego na 2026.
Rolls-Royce na-agba mbọ ịhụ na ngwaahịa ọhụrụ ya ga-adaba na ọrụ efu efu site n'afọ 2030 na ngwaahịa niile ga-adaba na efu efu site n'afọ 2050.